मामा र भान्जीलाई राती र,ङेहात भेटेपछि आफन्त गर्जिए, दिदिहरु रिसले आगो भए, बुबाले खोले नसोचेको र’हस्य (भिडियो सहित):: Mero Desh
मामा र भान्जीलाई राती र,ङेहात भेटेपछि आफन्त गर्जिए, दिदिहरु रिसले आगो भए, बुबाले खोले नसोचेको र’हस्य (भिडियो सहित)
Published on: ११ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १२:४३
‘मोरंग । मोरङको पथरी स’निस्चरे- १० मा एउटा घिन लाग्दो घटना घटेको छ । मामा भान्जी साइनो पर्ने २६ बर्षिय युवा र लगभग १६ बर्षकि युवतीबीच यस्तो काम भएको हो । स्थानियका अनुसार त्यो बेलुका २ जनानै नसामा रहेको जनाएका छन् । युवतीले आफुलाई ज’बर र्जस्ति गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि ति युवालाइ इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले प’क्राउ गरेको छ ।
‘युवकको घरमा पुग्दा यस्तो काम सहमतिमा २ जनाले नसाको सुरमा गरेका हुन्, सजाय हुँदा २ जनालाईनै हुनुप र्ने उनीहरुले माग राखेका हुन् । उनलाई प्रहरीले सोहि दिन प’क्राउ गरेको जनाएका छन् । ति युवकलाइ फ’साउनलाइ सबैको खेल रहेको भन्दै आफन्त आक्रोशित भएका छन् । के हो त बास्तबिकता ? छिमेकी तथा आफन्त संग गरिए को कुराकानी तल भिडियोमा हेर्नुहोला।
यो पनि,,गायक रामकृष्ण ढकाल, अमेरिका,बाटै नेपालमा सहयोग जुटाउँदै, महाविर पुनलाई दिए १८ लाख !
काठमाडौं, ११ जेठ । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्र मणको महामारी छ । अस्पतालमा बेड अक्सिजन र आइसियु छैनन् । अक्सिजन नपाएरै सयौँ नागरिकले मृत्युवरण गरिहेका छन् । यस्तो दुखःद अवस्थामा नेपाली कलाकारहरुले विभिन्न माध्यमबाट सहयोग जुटाइरहेका छन् ।
‘नेपालमा निषेधाज्ञा घोषणा भएपछि अमेरिकामै बस्न बाध्य भएका चर्चित गायक रामकृष्ण ढकालले अमेरिकामै सहयोग संकलन अभियान थालेका छन् । उनले नेपालमा अक्सिजन लगायत अत्यावश्यक वस्तु खरिदका लागि संकलित १८ लाख रुपैयाँ रकम राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महाविर पुनको एकाउन्टमा जम्मा गरिदिएका छन् ।”